Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Jalalaqsi u tegay xalinta qalalaase ! - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Jalalaqsi u tegay xalinta qalalaase !
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Jalalaqsi u tegay xalinta qalalaase !
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa waxaa ay gaareen degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan halkaas oo maalma ka hor uu ka dhacay dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah geystay.
Degmada Jalalaqsi ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyey Ciidamada Jabuuti ee howlgalka AMISOM iyo kuwa Booliska Hir-Shabeelle ,kuwaas oo isku khilaafay in hawada laga saaro Isgaarsiinta Magaalada xilli howlgal Miina baaris ah ay wadeen Ciidamada Jabuuti.
Wararka aan heleyno ayaa waxaa ay sheegayan in haatan Guddoomiye Caraale iyo Saraakiisha Ciidamada Jabuuti & Mas’uuliyiinta Maamulka degmada uu kulan uga socdo Xerada Ciidamada AMISOM ee degmada Jalalaqsi.
Previous articleHantidhowrka Guud oo Soo Saaray Musuqmaasuq Maaliyadeed. Halkan ka akhriso
Next articleCiidamo gadoodsan oo la wareegay Xarumo ku yaalla Baladweyne